गोरखाका लामिछाने फेसबुकमा कमेन्ट गरेको भरमै देश निकाला ! | Capital Khabar ::
गृह प्रबास गोरखाका लामिछाने फेसबुकमा कमेन्ट गरेको भरमै देश निकाला !
गोरखाका लामिछाने फेसबुकमा कमेन्ट गरेको भरमै देश निकाला !
कतार,भाद्र ६ – कतार सरकारले गोरखाका ३२ वर्षीय दीपक लामिछानेलाई डिपोर्ट (देश निकाला) गर्ने तयारी गरेको छ । देश निकालाको लागि कतार सरकारले लामिछानेलाई लागि पक्राउ गरिसकेको छ । उनलाई घरफिर्ती केन्द्र (डिपोर्टटेशन सेन्टर) मा राखिएको छ ।
कतारी प्रहरीले उनलाई स्वदेश पठाउन बिहीबार नै फिङ्गरीङ’ (औंला र हत्केलाको छाप) गरिसकेको छ । प्रहरीको आग्रहमा कम्पनीले शनिबारको हवाई टिकट समेत दिइसकेको थियो । दूतावासले आग्रह गरेपछि लामिछानेलाई तत्काल पठाउने काम रोकिएको छ ।लामिछानेले आफूबाट कतारको नियम कानुन उंलघन हुने कार्य नगरेको भन्दै कतारमै रहेर काम गर्न पाउनुपर्ने बयान दिएका छन् ।
अघिल्लो लेखमाबादलको नेतृत्वमा ‘ग्याङ् अफ फोर’
अर्को लेखमादाङमा गोली हानी दुईको हत्या
Pradip August 22, 2016 at 8:34 pm